Ipropathi ibucala ngokupheleleyo kwaye ngelixa ubona izindlu zikude, izolile kwaye izolile. Isibhakabhaka ebusuku asinakoyiswa.
Eli likhaya elisebenza ngelanga elineempawu ezikhethekileyo zokuyigcina ipholile ehlotyeni kwaye ishushu ebusika. Izifudumezi ze-baseboard zinceda ngobushushu, kodwa izitovu ezimbini zokhuni zenza umsebenzi onzima wokuphakamisa ubushushu obutofotofo. Ukhuni luyafumaneka kunikezelo lwethu ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo.
Ikhaya lethu linegumbi lokuhlambela elinye kuphela esinokwabelana ngalo.
I-spinner endala kodwa enkulu iyafumaneka kunye nomatshini wokubheqa osisiseko, kunye neekhilomitha zokuhamba kunye nokuhamba ngebhayisekile ngeenxa zonke, kubandakanya ukuhamba ngebhayisekile kunye neendlela zokuhamba ekuqhubeni umgama.